Banyere Anyị - Taizhou Zhonghan Tools Co., LTD
Light Hammer malite ịgba
Arọ Hammer malite ịgba
Cordless Hammer malite ịgba
Taizhou Zhonghan Ngwaọrụ Co,, LTDGuzosie ike na 2003 (aha ụlọ ọrụ ochie bụ Taizhou Huangyan Hongye Machiner Company), Anyị bụ ndị ọkachamara na-emepụta ihe na onye na-emepụta ihe na mba ndị ọkachamara na mmepe, mmepụta na ire ahịa dị iche iche nke rotary hama, eriri igwe na-eme ihe na ngwa ọrụ eletriki, kwadoro iji wuo ụwa niile. ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Anyị na-dị na Chengjiang Industrial mpaghara nke huangyan obodo na-adaba adaba njem. Na hama anyị niile na-agbaso ụkpụrụ ogo mba ụwa ma nwee ekele dị ukwuu n'ọtụtụ ahịa dị iche iche n'ụwa niile.
Anyị nwere ike inye ọkachamara OEM & ODM Ọrụ, nwere ike ime 3D imewe & rụpụta ngwaahịa dị ka ndị ahịa imewe echiche ma ọ bụ n'ezie samples, iji hụ na gị pụrụ iche arịrịọ nwere ike na-eju afọ Ọ bụrụ na i nwere mmasị na ihe ọ bụla nke anyị hama ma ọ bụ ga-amasị-atụle a omenala ịtụ, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị. Anyị na-atụ anya na ị ga-enwe mmekọrịta azụmaahịa na ndị ahịa ọhụụ gburugburu ụwa n'ọdịnihu dị nso.
CCC Asambodo na OA asambodo
Nwere ọtụtụ narị ndị ọrụ
The ụlọ ọrụ ekpuchi 5000 square mita
Taizhou Zhonghan Ngwaọrụ CO, LTD. etinyela uche na njikwa ụlọ ọrụ, anyị agafeela nkwenye kwekọrọ na mba ụwa dị ka asambodo CCC na asambodo CE, companylọ ọrụ ahụ kpuchiri mita 5000, nwere ọtụtụ narị ndị ọrụ, enwere ọtụtụ agụmakwụkwọ, gụnyere ngwa ọrụ, ịkpa ike ike, ịkpụ osisi, aluminom nhazi, okpomọkụ ọgwụgwọ, egweri, Motors na nzukọ noo, na mgbakwunye na nwere elu mmepụta edoghi na China na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke elu-ọgwụgwụ mmepụta akụrụngwa na ule equipments maka electric hama na mastered mba na-eduga n'ichepụta na R & D technology. Anyị ifịk ifịk ịme na nkà mmụta sayensị management usoro, elu mmepụta & ule akụrụngwa iji hụ ngwaahịa na mụ na elu àgwà na-ekwe nkwa ngụkọta ahịa afọ ojuju na ike a mmeri-mmeri ga-eme n'ọdịnihu na niile azụmahịa mmekọ.
Taizhou Zhonghan Ngwaọrụ CO, LTD.a gbanwee si mmepụta ụlọ ọrụ n'ime onwe ha nnyocha na mmepe nke n'elu-larịị ike ngwaọrụ ama ama ụlọ ọrụ. Dika nsonaazụ nke igwe dị elu na ọrụ ndị ahịa pụtara ìhè, anyị enwetala netwọkụ ahịa zuru ụwa ọnụ yana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 80% nke igwe rotary anyị ka ebupụla Europe, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Mid-East na South America
Workingkpụrụ ọrụ nke igwe ọkụ ...
Oge 129 nke Oge Canton Fair ...
Nyocha banyere ọnọdụ na oge a ...
Mba 69 Xiangnv Road, chengjiang Street, huangyan, taizhou
Kpọọ Anyị Ugbu a: 0086-576-84030668